केपी ओलिको गृह नगर नेकपा एमालेको गण भत्कियो,गठबन्धनको राम थापा र रेगिना भट्टराई बिजय | रेडियो झापा 100.7 MHz.
रेडियो झापा 100.7 MHz. शुक्रबार, जेठ ०६, २०७९ ११:४६:५५
राष्ट्रिय चासोकोरुपमा हेरिएको झापाको दमक नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा एमाले पराजित भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह नगर दमकमा गठबन्धनले एमाललेलाई पराजित बनाएको हो । एमालेको ३ दशकको विरासतलाई यस पटक गठबन्धनले भत्काएको छ ।
नगरको प्रमुखमा काँग्रेश, माओवादी र राप्रपाको तालमेलमा बनेको गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नु भएका राप्रपाका राम थापा विजयी बन्नु भएको छ । उहाँले एमालेकी नेतृ गीताकुमारी पौडेल अधिकारीलाई ५ सय ५९ मतान्तरमा हराउनु भएको हो । अधिकारी नगरकी निवर्तमान उपप्रमुख समेत हुनुहुन्थ्यो । थापाले १७ हजार ५ सय २५ मत प्राप्त गर्नु भएको छ ।
यस्तै उपप्रमुख पदमा नेपाली काँगेशकी रेगिना भट्टराई प्रसाँई विजयी बन्न भएको छ । उहाँले १७ जार ७२ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । उहाँको निकटम् प्रतिद्वन्द्वी एमालेका अम्बिकाप्रसाद खनालले १६ हजार ५ सय ७४ मत प्राप्त गरेका छन् । ३९ हजार ८ सय ९५ मत खसेको १० वटा वडा रहेको दमकमा ७ वटा वडाको अध्यक्षमा एमाले र अन्य वडामा काँग्रेश र राप्रपाले विजय हासिल गरेको छ ।